राष्ट्रिय सम्मानसहित पूर्वमन्त्री घिमिरेको कुशको शव बनाएर अन्त्यष्टी
छ दिन पहिले गत आइतबार सवारी दुर्घटनामा परेर त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका पूर्व गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेसहति बेपत्ता तीनजनाको अन्त्यष्टी गरिएको छ। कुशको शव बनाएर तीनैजनाको शुक्रबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टी गरिएको हो। घिमिरेलाई नेपाल प्रहरीको...
मापदण्ड विपरीत जग्गा प्लटिङ
तपाईंले सहरी क्षेत्रमा घडेरी खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ? या प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यस्तो योजना छ भने सरकारले ल्याएको मापदण्डको ख्याल गर्नुहोला । अबदेखि जग्गा बिक्री गर्दा नगरपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।...
दाङमा उच्च अदालतबाट शेवा सुरु
दाङमा उच्च अदालत माफर्त न्याय सेवा शुरु भएको छ । न्यायलयको संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दाङमा स्थापना गरिएको पाँच नम्बर प्रदेश स्तरीय उच्च अदालतले न्याय सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको हो । तुलसीपुर...
चार वर्षमै बिग्रियो विद्यालयको हालत
रूपन्देही सैनामैनाको एक विद्यालयमा कक्षा ३ र ५ मा दुई–दुइ जना विद्यार्थी रहेका छन् । नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र सैनामैना– ११ पटनास्थित गोरखनाथ प्राथमिक विद्यालयमा जम्मा विद्यार्थीको सङ्ख्या १६ रहेको छ भने ३ जनाको शिक्षक...
सरकारलाई डाक्टर केसीको थप एकहप्ताको अल्टिमेटम
स्वास्थक्षेत्रमा भएका वेतिथि विरुद्ध आन्दोलनरत डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्ना माग पुरा नभए एकसाता पछि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।...
आयुर्वेद औषधालय औषधिको अभाव
बटौली । यस क्षेत्रको सवैभन्दा पुरानो लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमा प्रयाप्त औषधिको अभाव हुदा विरामीहरु मर्कामा परेका छन् । आयुर्वेद औषधालयमा आउने विरामीहरुले सेवा निशुल्कका साथै औषधिहरु पनि निशुल्क पाउने हुदा औषधिको प्रयाप्त नहुदा...
शहरमा तीजको रमझम, पार्टी प्यालेसमा तीजका कार्यक्रम
तीज आउन अझ एकसाता बाँकी छ । कृष्णजन्माष्टमीपछि तीजको रौनक ह्वात्तै बढेको छ । तीजका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । बजारमा तीजको किनमेल उस्तै छ । पार्टी प्यालेसहरु भरिभराउ छन् । बुटवलमा तीजको रौनक कस्तो...